Man City oo hogaanka xajisatey, Chelsea oo la garaacay & warar kale (EPL) – SBC
Man City oo hogaanka xajisatey, Chelsea oo la garaacay & warar kale (EPL)
Shan gool oo Sadexley goolal ah oo uu dhaliyey laacibka & captain-ka kooxda Arsenal Robin Van Persie ayaa u sahlay kooxda Arsenal inay guul caaqibo leh ka gaarto kulan adag oo ay Chelsea ku wada yeesheen gurigeeda Stamfordbidge taasi oo meesha ka saartey mudo 3 sano ah oo ay Arsenal gurigaasi ku badiso.
Kulankan oo ahaa mid aad u adag wuxuu ka goolal badnaa shan kulan oo ay ku kulmeen 10 kooxood maadama goolasha la kala dhaliyey ay gaarayeen 8 gool oo shan ka mid ah ay ku guuleystey kooxda martida aheyd ee Arsenal oo markii ugu dambeysay ee ay guul kala tagto guriga Chelsea ay aheyd 30-kii November 2008-dii, xiligaasi oo labada gool ee Arsenal ku badisay uu dhaliyey ciyaaryahan Van Persie.
Goolasha Chelsea laga dhaliyey waxay ka dhigan tahay in 9 kulan oo ka mid ah tobonkii kulan ee ay ciyaartey horyaalka Premier Leugue-ga sanadkan aanay dhicin mid aan gool laga dhalin tani oo ah markii ugu horeysay mudo 10 sano ah sidani dhacdo.
Guusha askarta Arsene Wenger ka gaareen kulanka Chelsea waxay ka dhigan tahay macalin Wenger oo 22-kii bishan u dabaaldegay sanad guuradiisii 62-aad guushii 500-aad ee uu kula wadaago kooxda Arsenal 15-kii sano ee uu laylinayey kooxda ka dhisan waqooyiga London.
Sidoo kale shan gool in Chelsea lagaga badiyo gurigeeda waxaa ugu dambeysay 12-kii Septmber 1996-dii xiligaasi oo kooxdii martida aheyd ee Liverpool ay ku garaaceen wiilashii Ruud Gullit ee Chelsea 5-1 oo laba ka mid ah goolashaasi uu u dhaliyey weeraryahankii reer Czech Republic Patrik Berger.
Tababaraha da’da yar Andre Villas-Boas ee reer Portugal ee sanadkan laylinaya kooxda Chelsea ayaa guuldarani waxay u aheyd tii ugu balaarneyd ee uu kala kulmo horyaalka Premier League-ga.
Inkastoo ciyaaryahan Frank Lampard uu kooxda martida ee Chelsea siiyey hogaaminta ciyaarta daqiiqadii 14-aad hadana qaladaad badan oo ka yimid daafacyada labada dhinac kubad qaabeysan oo uu soo baasay ciyaaryahanka da’da yar ee Arsenal Aron Ramsey uuna dafay weeraryahanka Gervinho uuna u sii dhigay Van Persie kaasi ayuu si xarago leh kubadaasi u dhex dhigay shabaqa Chelsea waxaana ciyaartii ay noqotey 1-1.
Laakiin captain-ka Chelsea ee ay haysato dacwada ku aadan in uu hadalo cunsurinimo ah uu ku yiri ciyaaryahanka ka tirsan kooxda QPR ee Anton Ferdinand ayaa kubad koorno ah uu madaxa la helay wuxuu dhaafiyey daaca jilicsan ee Arsenal taasi oo isla qaybtii labaad ciyaarta ka dhigtey 2-1 oo ay hogaanka ku hayso kooxda martida loo ahaa.
Qaybtii labaad markii dib la isugu soo laabtey ciyaartoyda Arsenal kama quusan kulanka waxaa ay qaadeen weeraro kala duwan waxaana kubad la isku soo dhiidhiibay ay lugta u gashay daafaca Arsenal ee reer Brazil Andre Santos kaasi oo si fudud u dabamariyey kubadii goolhayaha Chelsea Petr Cech oo kulankaasi aanu aheyn mid uu deganaan dareemo.
Lix daqiiqo ka dib goolkaasi gool kale oo caaqibo leh kana mid noqonayo goolasha ugu qurxoon ee bishan October lagu kala dhaliyey horyaalka ayaa waxaa la dhexmarey daafacyada Chelsea weeraryahanka reer Arsenal Theo Walcott kaasi oo laad xoog badan kubada ku hareer mariyey goolhaye Cech ciyaartiina ka dhigay 2-3 oo ay hogaanka kula wareegtey kooxda martida ah ee Arsenal.
Deganaansho & nasiino uma oolin daafacyada labada kooxood sidoo kale labada tababare iyo guud ahaan taageerayasha labada kooxood ayaa qolo waliba dhankeeda wadnaha farta ku haysay gaar ahaan sida ay ku dhamaato ciyaartan.
Isbadalo dhanka ciyaartoyda oo labada kooxood sameeyeen daqiiqadii 80-aad ayaa kubad si fudud looga dafay daafaca Arsenal ee goolkii labaad u dhaliyey waxay u gacan gashay xidiga khadka dhexe ee Chelsea iyo qaranka Spain Juan Matta kaasi oo aan wax shaki ah ka galin in uu kubad laad ah oo xoog badan uu ku tijaabiyo goolhayaha Arsenal Wojciech Szczency isla markaana aanu qaban karin kubadaasi xawaaraha ay ku socotey awgeed, waxaana neefta uu ku soo celiyey kooxda iyo taageerayaasha Chelsea sidaasina ay ciyaartii ku noqotey 3-3.
Shan daqiiqo ka dib goolkaasi barbar dhaca ahaa garoonkii loo martida ahaa ee Stamford Bridge waxaa ka dhacay wax la yaab leh ka dib markii kubad xaga dambe loo celiyey oo loo baasay John Terry uu gaari waayey ka dib markii uu dhulka ku sidbaday, waxaana kubadaasi si fudud ku qaatey Van Persie isagoo ula tagey goolhayaha Chelsea isagoo waliba u gooyey qanciyeyna goolhayaha kubadiina shabaqada ula tagey, sidaasina ay ku noqotey 3-4 ciyaarta.
Ciyaarta oo ay ka dhimatey 1 daqiiqo isla markaana mareysa 90+2 daqiiqo kubad counter attack ah oo ay isku soo dhiidhiibeen ciyaartoyda Arsenal ayaa ugu dambeyntii waxaa lugta la helay Van Persie isagoo si caaqibo leh ugu laaday goolka una suurtgali waayey in uu qabto goolhaye Cech sidaasina kulankii uu ku noqdey 3-5 ayna guushu ku raacdey kooxda martida aheyd ee Arsenal.
Lambard (daqiiqadii 14-aad)
Terry (Daqiiqadii 45-aad)
Mata (Daqiiqadii 80-aad)
Van Persie (daqiiqadii 36,85,90+2)
Santos (Daqiiqadii 49-aad)
Garoonka lagu ciyaarayey ee kooxda Chelsea ee Stamford Bridge waxaa soo xaadiray 41,801 qof.
Man United oo gool madi ah ku ilowdey wacdarihii ka qabsadey todobaadkii hore gurigeeda Old Trafford.
Kooxda Manchester United ee haysata horyaalka Premier League-ga sanadkan ayaa hal gool caato ah waxay guul kaga gaartey kooxda Everton oo ay kula ciyaartey garoonkeeda Goodison Park, goolkaasi oo Man United ka yara dabciyey dharbaaxadii todobaadkii hore ka qabsatey kulankii todobaadkii hore ay la yeelatey kooxda Manchester City ee lixda gool caasha u galisey.
Weeraryahanka reer Mexico Javier Hernandez ayaa u suurtagaliyey wiilasha martida ahaa ee macalin Sir Alex Ferguson daqiiqadii 19-aad inay hogaanka kulanka ku qabtaan.
Laakiin kooxda martida loo ahaa ee Everton kama quusan inay gool dhaliso waxaana deganaansho aanay u aheyn goolhayaha reer Spain ee Man United David de Gea oo dhawr jeer badbaadiyey kubado laad ah oo ka imaanayey weeraryahanada Everton.
Qaybtii labaad ee ciyaarta waxay ka joogtey kooxda Shayaadiinta cas cas (Man United) firimbigu muu dhawaaqo oo ciyaartu dhamaato, iyadoo fadhi iyo deganaan aanay u aheyn daafacyada Manchester United.
In ay ku aheyd kulan adag Man United waxaan qarin oo xitaa cadeeyey tababaraha Man United Sir Alex oo yiri “Wuxuu ahaa kulan adag, taasina waa mid aad ka filanayso mar kasta oo aad timaado Everton, waxaana taageerayashoodu u muujiyeen taageero & inaanay niyad jabin, laakiin kulanka qaybtiisa hore waxaan sameynay wax waanagfsan, kulanka qaybtii dambena waxaan isku difaacnnay taasina waa waxa aniga aad ii qanciyey”.
Sidoo kale Tababaraha kooxda Everton David Moyes oo ah tababaraha sadexaad ee ugu mudada dheer tababaraayasha kooxaha Premier League ayaa isaguna geestiisa ka sheegay in uu ka niyad jabsan guuldarada balse wuxuu sheegay in nasiibku ka hiiliyey oo ay wiilashiisu si wanaagsan u ciyaareen.
Hernandez (Daqiiqadii 19-aad)
Garoonka Everton ee lagu ciyaarayey ee Goodison Park waxaa soo xaadiray 35,494 qof oo daawadayaal ah.
Liverpool oo xajisatey kaalinta shanaad ee kala horeynta horyaalka Premier League-ga
Kooxda Liverpool oo Arsenal mudo saacado ah kala wareegtey kaalinta shanaad ayaa dib u soo ceshatey maqaamka kaalinta shanaad ka dib markii si xarago leh uga guuleystey kooxda West Bromwich Albion oo ay kula ciyaartey garoonka The Hawthorn.
Gool rigoore (gool ku laad) ahaa oo uu dhaliyey daqiiqadii 9-aad ciyaaryahan Charlie Adam ayaa siisay hogaanka kooxda Liverpool hogaanka kulanka, iyadoo daqiiqdii ugu dambeysay qaybtii hore ee ciyaarta uu goolkaasi labeeyey ciyaaryahan Andy Carroll.
Inkastoo kooxda West Bromwich ay isku dayday inay goolal ka dhaliso Liverpool hadana nasiibku ma siin wiilasha Roy Hodgson inay la yimaadaan goolal, waxaana isagoo arinkaasi ka hadlaya uu sheegay in ay ka niyad jabeen ciyaartooydiisu rigooradii loo dhigay kooxada Liverpool oo isagu sanadkii hore uu laylinayey.
Roy Hodgson wuxuu sheegay in aad uga xun yahay in istuuristii Suarez aanay aheyn mid sax ah, isla markaana lagu ded degay in garsooruhu uu u dhigo rigoorada kooxda martida aheyd.
Adam (daqiiqadii 9-aad)
Carroll (daqiiqadii 45+1)
Garoonka The Hawthorn ee kooxda West Bromwich ee lagu ciyaarayey waxaa soo xaadiray 25,522 qof.
Manchester City oo sii xajisatey hogaaminta horyaalka Premier Leauge-ga
Sadex gool oo qaybtii dambe ay dhaliyeen Edin Dzeko, Aleksandar Kolarov & Adam Johnson ayaa u sahlay kooxda Man City in ay hogaanka ku sii dheeraysato 5 dhibcood ka dib markii 3-1 ay u dhiibtey kooxda daan daanka ku jirta ee Wolves.
Inkastoo Wolverhampton ay aad isku adkeysay qaybtii hore oo ay 0-0 ku haystey kooxda boorsooyinka lacagta la dhacdhacaysa ayaa hadana qaybtii labaad ay xajin wayday inay sii hayso shabaqii difaaca ee ay xiratey, taasi oo u suurtagalisay kooxda martida loo ahaa ee Man City oo ku damaashaadaysay guushii Man United ay ka soo gaartey todobaadkii hore in ay jabiso daafaca Wolves ka dib markii qalad uu galey goolhayaha Wolves Wayne Hennesseyoo uu kubadii ku qabsadey ciyaaryahan Kun Aguero taasi oo uu si fudud ku helay weeraryahanka reer Bosnia Dzeko isla markaana shabaqa oo cidlo ah dhex dhigay kubadaasi sidaasina ay ku bilowdeen goolasha Man City.
Man City waxaa kaarka cas ka qaatey daafaca Vincent Kompany ka dib markii uu seeraha goosha uu ku dhex legday Stephen Hunt oo ka mid ah weeraryahanada Wolves iyadoo si aan shaki laheyn uu garsoorihii ciyaarta u siiyey Wolves rigoore ama gool ku laad.
Tababaraha kooxda Wolves Mick McCarthy ayaa dhamaadkii ciyaarta sheegay in ay cashar siiyeen Man City balse uu ka niyad jabsan yahay guuldarada soo wajahdey kooxdiisa.
Dzeko (Daqiiqadii 52-aad)
Kolarov (Daqiiqadii 67-aad)
Johnson (Daqiiqadii 90+aad)
Garoonka Man City ee Etihad Stadium ee lagu ciyaarayey waxaa soo xaasdiray 47,142 qof.
Hun (gool ku laad daqiiqadii 75-aad)
Kulamadii kale ee Sabtidii dhacay
Kulanka kaliya ee Axada dhacay
Tottenham oo 3-1 ku jiirtey Queans Park Rangers
Laba gool oo laacibka Wales Gareth Bale uu dhaliyey & gool kale oo uu raaciyey xidiga reer Holand Refael Van der Vaart ayaa u saamaxay kooxda Tottenham ee ka dhisan waqooyiga magaalada London inay ka qaadato sadexdii dhibcood ee loo baratamayey kooxda ay isku magaalada London ka dhisan yihiinee Queans Park Rangers.
QPR oo todobaadkii hore gurigeeda Loftus Road ku soo garaacdey Chelsea ayaa loogu awood sheegtey garoonka Tottenham ee White Hart Lane iyadoo Tottenham si wanaagsan u maamulatey qaybtii hore ee ciyaarta, inkastoo QPR ay qaybtii dambe soo kacdey oo ay la timid hal gool hadana waxaa u suurtagali waayey in ay hesho wax goolala ah oo ay ku kabto goolka madiga ah ee uu u dhaliyey Jay Bothroyd.
Van der Vaart (Daqiiqadii 33-aad)
Bale ( 20-aad, 72-aad)
Bothroyd (Daqiiqadii 62-aad)
Garoonka Tottenham ee White Hart Lane ee lagu ciyaarayey waxaa soo xaadiray 36,147 oo qof.
Caawa oo Isniin ah waxaa la ciyaaraya halka kulan ee dhiman wareega 9-aad ee horyaalka England kaasi oo ku dhexmari doona garoonka : Britannia Stadium ee kooxda Stoke City kooxda kale ee martida u ah ee Newcastle United oo xili xiyaaraadkan 8-dii kulan ee la ciyaaray aan hal marna dhulka la dhigin iyo waliba lixdii kulan ee ugu dambeysay sanadkii hore taasi oo ka dhigan 14 kulan oo xiriir ah oo Premier League-ga ah aan laga badin tani oo ah markii ugu horeysay tan iyo sanadkii 1997-dii.
Kulankan in lagu kala guuleysto oo ay Newcastle ku badiso isbadal ayuu ku keenayaa kala horeynta kooxaha oo Newcastle waxay kala wareegaysaa kaalinta 3-aad kooxda Chelsea oo ay haatan isku dhibco yihiin, hadiise laga badiyo waxay u noqonaysaa in laga jabiyey rikoorkii laga badin la’aanta ee ay ku socototey, waana ay adag tahay in Stoke gurigeeda lagaga badiyo sidii uu u bilowday xili ciyaareedkan kulamadii gurigeeda ay ku ciyaartey oo dhan midna lagama badin oo waxay ka dhigan tahay “Mukulaal mininkeeda joogta miciyo Libaax bey leedahay”
Waxaa isbadal la yaab leh uu ku yimid gooldhalinta oo waxaa si fudud ku qaatey xidiga koxoda Arsenal Robin Van Persie oo 10 gool xiligan ku hogaaminaya gool dhalinta isagoo ka qaatey booskaasi laacibiinta Wayne Rooney, Sergio Aguero & Edin Dzeko oo iyagi haatan min 9 gool leh.